Ukuhlanza ama-Franchise - Izakhiwo Zokuthuthuka Ekhaya | I-Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Ukuhlanza amaFranchise
Izimpawu Zokuhlanza Ezikhonjisiwe
I-Techclean yaqala ukuhweba ngonyaka we-1983 futhi sebengongoti abahamba phambili base-UK kwezokuhlanzeka kohlelo. Ochwepheshe abangahlalwa kalula njengekhaya ...
Iningi labantu kulezi zinsuku lingama-germaphobic futhi yingakho isidingo semisebenzi yokuhlanza siqala ukukhuphuka njalo ngonyaka. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi uyazicabangela wena ukuthi yini ungajoyini le mboni ekhula ngokushesha?
Izibalo ezizungeze imboni yokuhlanza.
Manje ngizokwabelana ngezibalo eziqoqwe embonini yokuhlanza eminyakeni eyedlule ukukhombisa ukuthi imboni yayo enhle kakhulu ezobandakanyeka kuyo.
Kusukela ngonyaka ka-2010 umkhakha wokuhlanza ubone ukwenyuka kwemali engenayo engama-21% e-UK - isibalo esiseduze nesingaguquki emhlabeni wonke.
Umkhakha wokuhlanza e-UK uqashe abantu abamangazayo abangama-700,000. E-USA, bangaphezu kwezigidi ezingama-3.2 abantu abaqashwe emkhakheni wokuhlanza, kanti okufunwayo emhlabeni wonke ngezinsizakalo zokuhlanza kukhulu.
Ngokombiko we-MTW Cwaninga umkhakha wokuhlanza inkontileka ubaluleke ngaphezu kwe- $ 3bn emnothweni wase-UK.
Ukuhlanza kuzohlala kunesidingo esikhulu kuwo wonke amazwe emhlabeni. Kungumkhakha ongeke uphele.
Zibonisani lezi zibalo?
Kuyacaca ukuthi kunesidingo esiphakeme kakhulu sezinsiza zokuhlanza hhayi e-UK nase-USA kepha emhlabeni wonke. Yiba yikhompiyutha yokuhlanza i-computer efana neTechclean, ezinsizakalweni zokuhlanza ezifuywayo nezamahhovisi, manje yisikhathi esihle sokusebenzisa leli thuba lemakethe elinenzuzo.
Dlulisa amehlo kumasheya wokuhlanza usebenzisa iFranchiseek namuhla.
Uma ufuna amathuba amahle kakhulu wokuhlanza umhlaba we-franchise. Ngemuva kwalokho ngikucebisa kakhulu ukuthi wenze ucwaningo oluhle ngesigaba sethu sokuhlanza ukuhlanza ukuthola ithuba lokuthengisa elingakulungela. Futhi uma ungeyena fan wemboni yokuhlanza yize ikhula ngokushesha eminyakeni edlule. Ngemuva kwalokho ngincoma ukuthi udlulise amehlo kulo lonke lwemibhalo yefranchise yamaFranchiseek enikezela ngamathuba amaningi athokozisayo e-franchise.